Zavona vatana - Inona izany, ny fomba fampiasana azy ary ny maro hafa | Bezzia
Susana godoy | 22/06/2022 12:00 | beauty
Angamba efa fantatrao ny atao hoe zavona vatana. Fa raha tsy izany dia aza manahy fa eo amin'ny toerana mety ianao. Ho hitanao hoe inona izany sy ny fomba fampiasana azy. Satria ny vokatra hatsaran-tarehy rehetra dia miteraka fisalasalana maromaro ary noho izany, satria te-hiloka amin'izy rehetra isika dia tsy maintsy hamaha azy ireo.
Amin'ity tranga ity dia mandeha any amin'ny sisin'ny menaka manitra sy hanitra amin’ny ankapobeny. Noho izany, ity fahavaratra ity dia mety ho vanim-potoana tsara indrindra hamela ny tenantsika ho entin'ny hevitra tahaka izao amin'ny endriky ny zavona vatana. Fikasihana mamelombelona, ​​miaraka amin'ny hanitra mety handrakotra ny vatanao. Noho izany, fantaro ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny vokatra toy izany.
1 Inona no atao hoe zavona vatana
2 Maharitra hafiriana ny zavona amin'ny vatana?
3 Ahoana ny fampiasana ny famafazana vatana
4 Ny fahasamihafana lehibe amin'ny ranomanitra
Inona no atao hoe zavona vatana
Tonga amin'ny teboka tsy maintsy hamaritana ny momba an'io vokatra io isika. Eny ary izany karazana zavona azo ampiharina amin'ny vatana noho ny famafazana azy. Ny asany dia ny mandomando ny hoditra, ary manome azy ho malefaka sy mampifandanja ny PH-ntsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny mamaritra azy ho toy ny famafazana amin'ny vatana izay mitovitovy amin'ny deodorant ihany koa, satria izy io koa dia manome menaka manitra. Malemy kokoa sy marefo kokoa izy io, ka ho tsapanao ny famelombelomana ny vatanao ao anatin'ny fotoana fohy noho ny hevitra toy izany.
Maharitra hafiriana ny zavona amin'ny vatana?
Tsy afaka mamaritra fotoana manokana isika, satria hiankina amin'ny marika tsirairay izany ary na amin'ny hanitra mihitsy aza. Marina fa afaka milaza izany isika Maharitra ela kokoa noho ny menaka manitra izy ireo, satria tsy maintsy mieritreritra ianao fa zavona na rano fotsiny, maivana kokoa. Ka ny hanitra dia efa ho malama hatrany am-boalohany. Na dia mbola mila zavatra tombanana kokoa aza ianao dia afaka manome toky anao izahay fa mety haharitra ora roa na mihoatra izany. Mazava ho azy fa tsy maharary ny mitsirika ny tenanao amin'ny vatana imbetsaka mandritra ny andro raha te hihazona an'io freshness sy hanitra io ianao.
Ahoana ny fampiasana ny famafazana vatana
Fantatra amin'izany fomba izany ihany koa, holazainay aminao izany hatrany tsara raha hosorana amin’ny hoditra rehefa avy nandro. Ary koa, raha manana savony na gel manana fofona mitovy amin'izany ianao, dia tsara foana ny mampitombo ny hanitra. Raha tsy izany, amin'ny hoditra madio sy maina tsotra izao, dia afaka manondraka kely amin'ity tifitra vatana ity isika. Tsarovy fa tokony ho 6 na 7 santimetatra ny halaviranao. Raha tianao haharitra ela kokoa ilay hanitra, dia tokony hosorana amin'ny hoditra mbola mando.
Ankoatr'izay dia tonga lafatra foana izy ireo mba hanafoanana ny fofona rehetra azonay entina eny an-dalambe na amin'ny akanjo iray, sns. Amin'ny alàlan'ny etona haingana dia afaka miakanjo indray ianao amin'izao fotoana izao ary mazava ho azy, avereno mandritra ny andro mba hanohizana mamelombelona ny hoditra. Noho izany, dia hihazona azy ho hydrated fa miaraka amin'ny fikasihana freshness izay tena tianay. Indraindray ity vokatra ity dia ampiasaina ho fanampin-tsakafo, satria tsy voatery hampiasa azy irery ianao. Azonao atambatra amin'ny crème manitra tianao indrindra ary tsia, tsy hifangaro ny hanitra.
Ny fahasamihafana lehibe amin'ny ranomanitra
Ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe dia ny alikaola, satria ny menaka manitra no betsaka kokoa. Fa izany no mahatonga ny zavona vatana dia miahy bebe kokoa sy tsara kokoa ho an'ny hoditra. Satria tena iray amin'ireo asany lehibe izy io ary efa voalazanay. Io menaka manitra io koa no maharitra ela ary ho lafo kokoa. Satria matetika manana vidiny mora kokoa ity spray body ity. Noho izany, tonga ny fotoana ho lasa lavitra azy ireo, hahita hanitra vaovao sy ny fampiasana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Body Mist: inona izany, ny fomba fampiasana azy ary ny maro hafa
Mitombo hatrany ny fampiharana mampiaraka any Espaina